Cedar | SomaliTalk.com - 9/9/2002
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa ay ka mid tahay magaalooyinka lagutilmaamo in ay degganyihiin soomaalida ugu tirada badan ee qurbaha kunool, gaar ahaan woqooyiga Ameerica.
Magaaladan Minneapolis waa magaalo cimilo ahaan leh laba xilli oo aad u kala fog, waa xilliga qabowga oo cimilo ahaan la mid ah Canada, iyo xilliga kulaylaha oo cimilo ahaan u dhow cimilada Sanguuni (Soomaaliya) ama dhulka uu maro dhulbaruhu, xilligan waxaa lagujiraa waqtigii kulaylaha inkastoo uu gabaabsi yahay.
Soomaalida magaaladan kunool tiro ahaan wax xaqiijiyey majiraan, laakiin waxaa qiyaaso dhawr ah sheegeen in tiro ahaan dadka kunool labada magaalo ee looyaqaan mataanaha (Minneapolis/St.Paul) ay baro dheereeyeen ama ka badanyihiin Soomaalida deggan magaalada Toronto ee carriga Canada oo waagii hore lagu tilmaamijirey inay deggan yihiin tirada ugu badan Soomaalida woqooyiga Ammerica ku nool.
Soomaalida deggan gobolkan Minnesota waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin dad aad u firfircoon, waxayna ka muuqdaan dhammaan qaybaha bulshada, ganacsiga, waxbarashada, iyo xataa mararka qaarkood siyaasada gobolka - markaan taas leeyahay waxaan xusuustaa doorshadii uu qof Soomaaliyeed kii ugu horeeyey Minnesota isu soo taagey duqa magaalada Minneapolis, kaas oo ahaa Maxamuud Wardheere, oo weli miisaan weyn kuleh ayaaha siyaasadda gobolkan, sida uu bishii Maarso ee sannadkan kula kaftamay duqa magaalada Minneapolis ee hadda oo yiri "Iska Sabir Sanadka soo socda ayaad heli doontaa mayor-nimo".
Miisaankaas weyn ee soomaalidu kuyeesheen Minnesota waxa ay ku kasbadeen hawlkarnimo dheeraad ah oo ay muujiyeen. Halkarnimadaas ay soomaalidu muujiyeen intii ay Woqooyiga Ameerika yimaadeen waxaa kamida dhanka ganacsiga oo ay meel wanagsan ka gaareen. Taas weeye tan maanta qormadeenu ay kusaabsantahay, anaga oo soo qaadaneyna mid ka mida suuqyada Soomaalidu ku leeyihiin magaalada, waa suuqa Al-Karama oo aan booqday galabtay.
Al-Karama waa suuq weyne Soomaaliyeed oo dhowaan laga furay xaafadda ay Soomaalidu ugu badanyihiin ee loo yaqaan Cedar oo katirsan magaalada Minneapolis.
Suuqan waxa uu kuyaalaa meesha faras magaalaha u ah xaafadda Cedar, waxaa suuqa kudhow saddex masaajid oo kuu sahlaya in haddii aad dukaan halkaas kuleedahay aan Salaadu ku dhaafidoonin. Waxaa kale oo suuqaas u dhow dhawr makhaayadaha cuntada Soomaalida laga helo ama ay leeyihiin Soomaali.
Waxaa suuqa hor marta wadada weyn ee lamagac baxday Cedar, taas oo dukaanleyda u suurtagelineysa in sifudud alaabta halkaas loogu dejinkaro ama looga rarikaro wixii laga gato suuqa. Wadada Cedar waxay u dhigantaa wadada Estleigh (islii) ee Nairobi, wadada Dixon ee Toronto, ama wadada Morse ee Columbus, Ohio, waa marka laga hadlayo meelaha ay Soomaalidu ugu badanyihiin magaalooyinkaas.
Suuqa Al-Karama markaad soo dhexgashid waxaa durbadiiba indhahaagu qabanayaan alaabadii laguyaqaaney Soomaalida, ama alaabada ay hida ahaan Soomaalidu weligood iibinjireen, taas oo kusoo xusuusineysa suuqyadii Soomaaliya.
Markaad suuqa dhex istaagtid waxaa markiiba indhahaagu qabanayaan roogag iyo masalayaal si habaysan loo safay, kuwaas oo aad u bilicsan, inyar markaad sii dhaaftidna waxaa kugu soo baxaya maacuunkii (weelkii) oo miisaska lagu sharaxay, haddii aad inyar gudaha usii gudubtidna waxaad arkidoontaa dharkii Soomaalida , gaar ahaan dharka dumarka, oo derbiyada dukaamada camiray, waxaana korka sare ee wadada la marayo kasoo laadlaada dharkii ragga. Haddiiba aad dhexgashid suuqaas waxaa kugu soo dhacaya meeshaan adigoo aan wax ka iibasan haba kabixin.
Gudaha suuqu waxa uu u kala qaysanyahay dukaamo yaryar oo badankoodu camiran yihiin, qayb dhar isku nooc ah ayaad ku arkeysaa, qaybkalena alaabooyin kala duwan ayaa kamuuqda, waa meel lagutilmaami karo "wax-walba-haye". Keliya waxaad moodaa in dhulku uu ku yaraaday oo daarta suuqa ayaa malaha kaba yaraatay ganacsiga fidaye ee Soomaalida.
Meel dhexe oo suuqa ah markaad soo gaartid waxaa kuu muuqanaya fallaar muujineysa in uu jiro dabaq hoose oo katirsan suuqa. Markaad halkaas hoos ugu daadegtid waxaad arkidoontaa meel dhexe oo barxad ah oo lagu qaxwaynayo ama lagu cabayo shaahii casariyaha ahaa ee Soomaalida, waaba makhaayad Soomaaliyeed. Geesaha waxaa kaga teedsan dukaamo isugu jira Kharkhaanlayaal (dhartole), labadaayo (dhar-dhaqe), Dahable (dahab-gade), xafiisyo xawaaladeed iyo goobo kale oo ganacsi, waaba suuqyare kale oo hoos ku qarsoon, haddaan fallaartaas sare kuusheegina waaba kaa dhuumanlahaa.
Waxa xusid mudan, in makhaayada casariyaha ee aan sheegnay in ay kudhextaal dabaqa hoose ee suuqaas ay soo jiidatey dad badan maadaama marka aad casariyaha kusoo dhifatid ay salaadii makhrib goobtii lagu tukanlahaa u dhexeyso oo keliya wadada Cedar, waa meel aan sidaasba uga durugsanayn masaajidda.
Aan kusoo laabanee suuqa qaybtiisa sare waxyaabaha kale oo kuyaal waxaa kamida tima-jare, markii aan galabtay halkaas booqday waxaa kamuuqdey dad badani oo saf ugu jireen in timaha loogu jaro. Waa isku filansho in aadan meelkale u baahan inaad timaha kasoo jaratid, markaad surweelkii iyo shaarkii cusbaa suuqa ka gatay, oo timaha sii jaratay timajaraha halkaas ku dhexyaal, lebiskii waa isku dhan-yahay.
Al-Karama qaybtiisa guud ee laga soo galo waxa kale oo ku dhexyaal Xawaalado dhowr ah oo Soomaaliyeed oo kuu sahlaya in aad lacag ugu xawishid eheladaada.
XAWAALADDA TOWFIIQ Groups, inc
419 Cedar Ave So Suite 6
Waxaan ishaydu qabatay xawaaladda Towfiiq, markaas ayaan kuleexday, waxaana halkaas siwanaagsan iigusoo dhoweeyey wiil dhallinyaro ah oo markaas fadhiyey xafiiska, markii aan isusheegay in aan kasocdo SomaliTalk.com si niyad sami ah ayuu iigu tilmaamay calaamada xawaaladda tilmaanta u ah ee kamuuqata sawikan dhanka midig ee boggan.
Markaad suuqaas soo dhexmartid waxaa kaaga soo baxaya sida ay isku fillaanshaha u gaarayaan Soomaalida Minnesota, xagga ganacsiga.
Suuqyada magaalooyinka kale ee labarbar dhigikaro suuqa Al-Karama waxaa kamida labada suuq ee magaalada Columbus, Ohio ee lakala yiraahdo "Banadir Business Center" iyo "Aaran Business Center", waa marka laga hadlayo qaab dhismeedka dukaamada yaryar iyo xawaaladaha isku dhexyaal, kuwaas oo ah ganacsiga ugu kobcidda badan maanta ee Soomaalida qurbaha.
Dabcan waa jiraan suuqyo kale oo waaweyn oo Soomaalidu leeyihiin oo kuyaal Minneapolis, sida suuqa Karamel iwm, kuwaas oo qaybtood aan muddo hore warbixin kadiyaarinay. Muhiimada qormadase maanta waxay ahayd Suuqa Al-Karama oo sida aan horay u sheegnay haysta suuq aad u wanaagsan maadaama uu ku yaal meel xudun u ah degaanka ay Soomaalidu ku badanyihiin.
Marka laga soo tago suuqa Al-karama, ee aad wadada Cedar soo raacdid waxaa ku taxan dhawr dukaan oo Soomaaliyeed iyo Makhaayado aad ka heleysid bariiskii Soomalidu karinjireen iyo suqaarkii ama aan iraahdee cunto Soomaali. Dukaamada halkaas ku taxan waxaa kamida dukaan laga helo waxyaabo aad riqiis u ah, waana dukaan lagutilmaami karo Hal-doolar-le, taas oo uu magacaas ku kasbaday riqiisnimada.
Waxaa kale oo aagaas Cedar laga helaa dukaamo hilib Xalaal ah, oo ay leeyihiin Soomaali.
Ganacsiga ka sokow, waxyaabaha kale ee Soomaalida Minnesota lagu ammaano waxaa kamida waxbarashada, taas oo dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolkan ay aad ugu farabadan yihiin ardayda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa Soomaalida Minnesota lagu tilmaamaa in ay yihiin dad aad ugu firfircoon xagga shaqada, taas oo ah guul usoo hoyatey Soomaalida, tan oo weliba Soomaalidu ay kamid yihiin dadka soodegey Ameerika kuwii ugu dambeeyey, iyagoo gaarey horumrkaas la taabankaro, haddii ay sidaas kusoo socdaana ay gaaridoonaan meel sare.
Hadaba maadaama uu kobcayo ganacsigii Soomaalida Minnesota, maadaama ay yeelanayaan dad badan oo aqoonleh oo kasoo baxaya Jaamacadaha iyo kuliyadaha gobolka, maxaa la gudboon sidii ay taas usii wadilahaayeen ama usii kobcin lahaayeen. Waa in ay yeeshaan cod midaysan, taas waxaa aaminsan in badan oo kamida aqoonyahanada iyo indheer garadka Soomaaliyeed . Inta keli-keli lagu qabankaro kabad ayaa lagu qabankaraa codka midaysan una midaysan danta guud ee mujtamaca.
Waxaa xusid mudan taalo yar oo u dhisan sidii tiir oo kataagan meel dhawr tallaabo ujirta suuqa Al-Karama oo ay ku sawirantahay calaamadii astaanta u ahayd qaranka Soomaaliya, waa labadii shabeel, calalnkii iyo gaashaankii, kuwaas oo laga sameeyey dhagax aan u maleeyey marmar - waa sawirka ka muuqata dhanka bixid ee qoraalkan.
Tiirkaas yar waxa uu tilmaan u yahay sida ay magaalada Minneapolis u soo degeen dad kasoo jeeda dhaqamo kala duwan, kana yimid dhinacyo kala duwan oo dunida ah, dhinac kamida tiirkaas yar waxaa kutaxan qowmiyadaha kala duwan ee kunool magaalada, waxaana kamida Somaalida "Somalian", taas oo kuu muujineysa sida Soomaalidu ay raad ugu yeesheen magaaladan Minneapolis.
Waxa kale oo xusid mudan markaad kasoo tagtid suuqa Al-Karama ee kusoo dhowaatid daaraha dhaadheer Cedar inaad arkeysid Soomaali aad u farabadan oo fadhiya kuraas lagu hor sameeyey daarahaas barxadaha bannaan ee ka horeeya, halkaasna ku sheekaysanaya, waxay tani kusoo xusuusineysaa beri-samaadkii iyo Soomaaliya oo galabtii meelaha barxadaha la isugu imanjirey, inkasta oo fadhigaan daaraha hortiisa aysan sannadka oo dhan suurtagal ka ahayn Minneapolis sabab la xiriirta cimilada oo mardhow qabow awgeed kuraastaas ka dhigidoonta baraf farfadhiya.
Isku soo duuboo, suuqa Al-Karama waa suuq cusub oo Soomaaliyeed lehna aayatiin wanaagsan. Cedar-na waxay u muuqataa in suuqani uu kusoo kordhiyey horumar.
Haddaad joogtid Minnesota ha moogaan Suuqa Al-Karama oo kuyaal wadada Cedar ee caanka ah oo katirsan magaalada Minneapolis.
W.D. Maxamed Cali
SomaliTalk.com | Canada/USA
FAAFIN: www.SomaliTalk.com | September 9, 2002
GUDAHA SUUQA AL-KARAMA